What is Cyber Forensics ? (Part 14)
What is Cyber Forensics ? (Part 14) Electronic Crime တစ်ခုချင်းစီတွင် ပတ်သတ်ဆက်နွယ်နေသော သက်သေခံချက်များ Part (2) Identity Theft ( ID ခိုးယူခြင်း) Credit care အလွတ်များ . Credit Card Reader နှင့် Writer Credit card Generator Credit Card No များ ... Text file သို့ မဟုတ် rar Zip ဖိုင်များဖြင့်ထည့်ထားတတ်သည်... ပြည့်တန်ဆာအမှု ငွေကြေးစာရင်း လူစာရင်း (excel , world , database) ဆေးစစ်စာရင်း Image file Email,Note,Letter browser, chat record, Content No , call log မူးယစ်ဆေးဝါးအမှု ငွေကြေးစာရင်း (excel , world , database) Image file Email,Note,Letter browser, chat record, Content No , call log ဆက်သွယ်ရေးချိုးဖောက်မှု Sim card Clone (hard ware) user database Electronic Serial number (ESI) Mobile identification Number (MIN) Browser , social Network Record Note ( every crime leavesatrace) # Cyberforensics # Computerforensics # PART14
2017 အတွင်း အဖွဲ့အစည်းများမှ သတင်းအချက်အလက်ပေါက်ကြားမှု အကြောင်းအရင်းများ
Social Engineering , Phishing 55 % ( Social network သို့ Email, Website များတွင် လူအများကြိုက်နှစ်သက်သော အရာများဖြင့် ဖျားယောင်းပြီး .. သတင်းအချက်အလက်ရယူခြင်)း Regular Malware 49 % ( ရှိနေပြီးသား Virus များကို သတိမထားမိခြင်း ကြောင့်ပေါက်ကြားခြင်း ) Human Error 45% ( လူတွေ၏ အမှားကြောင့်ပေါက်ကြားခြင်း) Physical theft or lost 31% ( လူကိုယ်တိုင်ခိုးယူခြင်း Data ပါသော Device များပျောက်ဆုံးခြင်း) C2 Malware 25% ( command and Control ပါသော Malware များကြောင့် ပေါက်ကြားခြင်း (example ramsomware) Insider Breach 22% အတွင်းလူကြောင့်ပေါက်ကြားခြင်း Exploitation of unpatched (known) vulnerability 20% (သိနေပြီးသား အားနည်းချက်များကို သတိမထားခြင်းကြောင့်ပေါက်ကြားခြင်း Stolen Credentials 17% ( social network များတွင် မည်သူက မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း မည်သည့်နေရာ တာဝန်ယူထားသည်ကို ရှာဖွေကာ ...အချက်အလက်ရယူခြင်း0Day Attack 9% ( အများမသိသေးသော virus နှင် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် သတင်းပေါက်ကြားခြင်း အချက်အလက်တွေကိုကြည့်ရင် လူတွေရဲ့အမှားနဲ့ ဂရုမစိုက်မိတာက ရာခိုင်နှုန်းအများဆုံးဖြစ်နေတာကု
What is Cyber Forensics ? (Part 12)
Electronic Crime တစ်ခုချင်းစီတွင် ပတ်သတ်ဆက်နွယ်နေသော သက်သေခံချက်များ Online လေလံများနှင့် လိမ်လည်မှုများ ... . -ငွေကြေးစာရင်းများ ( eg ..database , excel, paper) , online တွင် အသုံးပြုသော Account website address book , account software, ငွေစာရင်းအမှတ် Credit card .. internet Browser history phone call log, mesage log email, note , social network chat log ,Photo, Screenshoot လိင်မှုကိစ္စအနိုင်ကျင့်မှုများ .. Image, video , social chat log, internet activities, browser activities, phone content , call log , ငွေစာရင်းအမှတ် Credit card . Computer မှတစ်ဆင့် ကျူးလွန်မှုများ ..... configuration file, exe file, bat file, rar, zip, tar,....................... internet activities, Browser log , text file, email log, social log , source code, ip address and Mac address, ငွေစာရင်းအမှတ် Credit card . --------------------------------- အခြားသော မှုခင်းများဖြစ်သည့် ... အွန်လိုင်းလောင်းကစား ငွေအကျပ်ကိုင်တောင်းဆိုမှု မဲလိမ်လည်မှုတို့ရှိ သက်သေခံချက်များသည် အထက်ပ
What is Cyber Forensics ? (Part 11)
Collection Evidence Part (1) တွေ့နိုင်တဲ့ evidence file နေရာတွေကတော့ Server,Ram.Hard disk , CD DVD, removable storage , cartridges စတဲ့နေရာေ တွပဲဖြစ်ပါတယ်..... User Created File User ပြုလုပ်ထားတဲ့ အရာအားလုံးဖြစ်ပါတယ် ... example= database file , documents file , audio video file, text file , internet bookmarks, User Protected File အသုံးပြုသူက အခြားသူမမြင်စေရန် ကာကွယ်ထားတဲ့ File များ ဖြစ်ပါတယ်... Example password protect file , folder , hidden file , rar,zip, tar, Computer Created File စနစ်မှ အလိုအလျှောက် ပြုလုပ်ထားတဲ့ File တွေဖြစ်ပါတယ် .... example = backup file , server log, event logs , system file , swap file, printer pools Electronic Device တွေကတော့ .... နေ့စဉ် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အသုံးပြုနေတဲ့ smart card တွေ အပါအ၀င် ကျန်တဲ့ device တွေပဲဖြစ်ပါတယ် ...အရှည်တော့မရေးတော့ပါဘူး ပုံမှာလဲဖော်ပြထားပါတယ် ကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့ အထက်က နေရာတွေကနေ evidence ကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်​ပြီး.. .အခြေအနေ , evidence Seizing အလိုက် power on သင့် မသင့်နဲ့ .Device ကို bit by bit copy ယူခြင်း တို့
What is Cyber Forensics ? (Part 10)
Type of Digital Data .....( Digital Data အမျိုးအစားများ) Volatile Data ..... (ပျက်စီးလွယ်သော Data သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်နိုင်သော Data ) Ram (primary memory) ပေါ်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေဖြစ်ပြီး Power Off ဖြစ်တာနဲ့ ပျောက်ကွယ်သွား ပျက်စီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်... (ပြင်ဆင်လို့လဲရပါတတယ်) user log on , Process information, command history, network history စသည့်တုို့ဖြစ်ပါတယ် ..... part (8) မှာပြောခဲ့တဲ့ Ram ပေါ်မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ bootable CD DVD stick တို့နဲ့ Privacy ချိုးဖောက်မယ် ဆိုရင် .. forensics လုပ်သူအနေနဲ့ အခြားသက်သေကို ရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ် .... Non-Volatile Data (မပျက်စီးလွယ်သော Data) Volatile information က ကွန်ပျူတာ ပါဝါမရှိတာနဲ့ ပျောက်ပျက်သွားပြီး Non-Volatile Data ကတော့ ပါဝါမရှိလဲ အချက်အလက်တွေ တည်ရှိနေပါမယ် .... ဒါဆိုရင် ကွန်ပျူတာရဲ့ Secondary Storage ဖြစ်တဲ့ Hard disk မှာသိမ်းဆည်းထားမဲ့ data တွေဖြစ်ပါတယ် .... hidden file , Swap file. index.dat file , Registry file. event log စတာတွေဖြစ်ပါတယ် ... Transient Data (မတည်မြဲ ပျောက်ကွယ်သွားမည့် Data ) ဥပမာ .... websငte တစ်ခုကို
What is Cyber Forensics Part (9)
Anti-Digital Forensics Digital Evidence စစ်ဆေးရာတွင်တွေ့နိုင်သော အခက်အခဲများ Digital Evidence ဆိုသည်မှာ Digital ပုံစံဖြင့် မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်မဆို သိမ်းဆည်းထားသည်ဖြစ်စေ ... ဆက်သွယ်နေသည်ဖြစ်စေ .... သက်သေထင်ရှားစွာပြနိုင်သော အရာကို ခေါ်ဆိုပါသည်... ။ Digital Evidence သည် ပျက်စီးလွယ်ခြင်း ကျွမ်းကျင်သူမှ ပုံဖျက်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် စစ်ဆေးရာတွင် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း ... အချိန်ကြာစေခြင်းတိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်... ။ - သိမ်းဆည်းနေစဉ် device ကို ပါဝါရုတ်တရပ် ပိတ်လုိုက်ခြင်း (Ram ပေါ်တွင်လုပ်ကိုင်နေသာ အလုပ်များ ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။ - storage ကို ဖျက်ဆီးခြင်း ( example . Format အကြိမ်များစွာချခြင်;) -အရေးကြီးသော အချက်အလက်များကို ဓတ်ပုံများ ဖိုင်များအတွင်းရောထည့်ထားခြင်း - file or data များအား Password ခက်ခဲစွာပေးပြီး သိမ်းထားခြင်း (ဥပမာ rar သို့ zip ပြုလုပ်ပြီး password ပေးထားခြင်း) - Bootable Cd /DVD /stick များကြောင့် စစ်ဆေးရန် အခက်တွေ့ခြင်း - စစ်ဆေးသူမှ နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှု နည်းခြင်း .... သက်ဆိုင်ရာ အပိုင်းလိုက် ကျွမ်းကျင်သူ နည်းပါးခြင်း - စစ်ဆေးရာတွင် အသုံးပြုသော device / sof
What is Cyber Forensics ? PART (8)
သက်သေခံ ပစ္စည်းအားပို့ဆောင်ခြင်း... မှုခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကနေ ... Forensics lab ကိုပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာ အချိန်အကန့်အသတ်ထားရှိရပါမယ် ..... ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ... digital သက်သေခံပစ္စည်းများကို မသမာသူ နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူက ကြားဖြတ်ပြီး ဖြတ်ဆီးနိုင် ပြင်ဆင်နိုင်လို့ပါ .... eg ... Wipe Data ... file , folder. date တွေ၇ဲ့Modified date .... ကိုပြောင်းလဲခြင်း CSI ဇတ်ကားထဲမှာပါတာကို ဥပမာပြရရင် .... သက်သေခံပစ္စည်းသယ်ဆောင်သွားသူက သတ်မှတ်ချိန်ထက်နောက်ကြပီးမှ forensics lab ကိုရောက်သွားပါတယ် ..အဲုဒါကို တစ်ဖက်ကရှေ့နေက သိသွားပြီး ... သက်သေခံ device ကို တရားရုံးမှာ တင်ပြခြင်းကို ကန့်ကွက်ပါတယ် .... နောက်ကျတဲ့ အကြောင်းကို ခိုင်မာတဲ့ အချက်အလက်လဲမပြနိုင်တဲ့အခါမှာ တရားသူကြီးက သက်သေခံသွင်းတာကို ပယ်ချပါတယ် (CSI ဇတ်ကားထဲမှာနော် .... :) ) forensics labေ၇ာက်၇င်စစ်ဆေးသူ ... စစ်ဆေးတဲ့နေ့၇က် အချိန် ... အမှု ..... ဘာကိုအသုံးပြုပြီးစစ်ဆေးသလဲဆိုတာကို record လုပ်ထားရပါမယ် .... paper အစား evidence tracking software , barcode , RFID တို့နဲ့လဲ မှတ်တမ်းယူနိုင်ပါတယ် .... သက်သေခံပစ္စည်းကိုလဲ မသက်ဆိုင်သူများ မကိုင်တ
What is Cyber Forensics ? PART (7)
သက်သေခံ Device အားမပျက်စီးအောင် ကာကွယ်ခြင်း ..... သက်သေခံသိမ်းဆည်းပုံ ... မှတ်တမ်းယူပုံ...တို့ကို အရင် post တွေမှာတင်ခဲ့ပြီးပါပြီး.... အခုရေးသားမှာက သက်သေခံ Device အားမပျက်စီးအောင် ကာကွယ်ခြင်း အပိုင်းဖြစ်ပါတယ် ..... သိမ်းဆည်းရမိတဲ့ Device ကိုစစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာ အမှားအယွင်းရှိခဲ့ရင် ပြန်လည်စစ်ဆေးလို့ရနိုင်အောင် Device ကို Clone (ထပ်တူ ကူးယူ) ရပါမယ်.... Linux မှာလဲ clone ယူနိုင်သလို forensics tools တွေဖြစ်တဲ့ Encase, Access Data tools တွေနဲ့လဲ clone ယူနိုင်ပါတယ် ... Original image ၇ဲ့ Hash Value (MD5 သို့ SHA1) နဲ့ Clone image ၇ဲ့ hash value တူရပါမယ် ..... Example soon ..... device ကို clone မယူခင်မှာ Write Protect (read only ) စနစ်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရပါမယ် .... Data တွေကို မူရင်း device မှာထပ်ပြီးပြင်ဆင်လို့ မရနိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ် .... case အမျိုးအစား write protect ပြုလုပ်သူ ပြုလုပိတဲ့နေစွဲ device အမျိုးအစားတို့ကို မှတ်တမ်းထားရှိရပါမယ်... Linux သို့ forensics tool, controller တွေမှာ write protect ပါဝင်ပါတယ် ... Example .... Sooon .... ထပ်ပြီးကာကွယ်ရမဲ့အပိုင်းကတော့ သက်သေခံ Dev
What is Cyber Forensics ? PART (6)
How to Management Evidence ? အခုဆောင်းပါးမှာတော့ Evidence Management အပိုင်းဖြစ်ပါတယ် .... ပထမဆုံး မှုခင်းဖြစ်ပွားနေရာရောက်မယ် ... - မှုခင်းနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ Device အားလုံးကို သိမ်းဆည်မယ် ... သိမ်းဆည်း ရမဲ့ နည်းလမ်းအချို့ကို အရင်ဆောင်းပါးတွေမှာရေးသားထားပါတယ် ... - သိမ်းဆည်းပြီးရင် Device တွေကို စာရင်းလုပ်မယ် ... - ဘယ်နေရာက သိမ်းတာလဲ .. - Case ကဘာလဲ .... - ဖမ်းဆီးတဲ့ အချိန်မှာ device က Power On နေလား Off နေလား - Deviceက ပျက်စီနေပြီးလား - Device နဲ့ ဘာတွေ ချိတ်ဆက်ထားလဲ ...phone Printer USB HD Moderm Wireless AP , LAN cable ... etc ..... - Device အမျိုးအစား ..... . - ချိတ်ဆက်နေတဲ့အနေအထားအတိုင်း View ပေါင်းစုံကနေ photo သို့ video ရိုက်မယ် ... ဖြုတ်သိမ်းပြီးမှ ရိုက်ရင် တရား၇ုံးမှာ အငြင်းပွားလာစရာ တွေရှိနိုင်တယ် .... ဥပမာ ပုံစံကို ပုံတွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ် .... ပထမပုံမှာဆိုရင် laptop နဲ့ External HD နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ် ... အပေါ်မှာပြောသလိုတပ်ဆင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ ဓတ်ပုံရိုက်မယ် ... ဒုတိယပုံမှာဆိုရင်... Printer Monitor KeyBoard ပုံတွေ့ရပါမယ် ... photo ရိုက်မယ် ပြီးရင် ... ဆက်ဆစ်
What is Cyber Forensics ? PART (5)
Forensics စစ်ဆေးမဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့ ရှိရမဲ့ IT နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Knowledge ကို part4မှာရေးထာပြီးပါပြီ.... IT Knowledge အပြင်နောက်ထပ်ရှိရမယ့် အရည်အချင်းတွေကတော့ ... - နောက်ကြောင်းရာဇ၀င်ရှင်းရပါမယ် .... - IT နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Degree တစ်ခုရထားနိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ် - Forensics စစ်ဆေးဖို့ ကောင်းကောင်း လေ့ကျင့်ထားတဲ့သူဖြစ်ရပါမယ် ( တရားရုံးမှာ သက်သေထွက်ခြင်း ... အသုံးပြုတဲ့ Forensics Lab ကို ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးချနိုင်းခြင်း) -IT နဲပတ်သတ်တဲ့အပိုင်းမှာ အတွေ့အကြုံရှိရပါမယ် . - A++ -Operation system (window , linux , MAC, etc .. ) - Basic Networking -Routing and Switching -Programming Basic -Server / Vmware / Bigdata -Virus မျိုးစုံသဘောတရား -Web application -Social Network (Facbook, twitter,linkedlin, etc .... ) -Mobile phone .. Tablet (software , hardware) -wireless Device.. အဲထဲက တစ်ခုထက်ပိုရပါမယ် ..... - တရားခွင်မှာလိုအပ်ပါက .... မိမိအမှုအတွက် IT ပိုင်းဆိုင်ရာကူညီသက်ေ သထွက်ဆိုပေးမဲ့သူကို ရွေးတတ်ရပါမယ်..... - IT ပိုင်းဆိုင်ရာ Certification သို့ forensics Certification ရရှိထားရပါ မယ်
What is Cyber Forensics ? PART (4)
Cyber Crime တစ်ခုကို ဆက်စပ်စဉ်းစားရန်မှာ ... Cyber or electronic Law မှာပြဌာန်းထားတာ ပါမပါ ကြည့်ရပါမယ် ဆက်စပ်မှုရှိ မရှိ လေ့လာရပါမယ် .... ဥပမာ ... bank တစ်ခုက... Bank website ကနေ ယနေ့ us ဒေါ်လာ ဈေးကို 1500 နဲ့ေ၇ာင်းမယ် .... တစ်ခြား bank တစ်ခုက 1300 ရောင်းဈေး .. ဒီ Case မှာဆိုရင် .... Ethic မရှိတာကိုပဲ တွေ့ရမယ် ... webiste ပေါ်ကနေဖြစ်ပေမဲ့ Cyber Crime case မဖြစ်ဘူး ..... နောက်တစ်ခုက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန် သက်သေခိုင်လုံအောင်ယူမဲ့အပိုင်း ... ဥပမာ ... ကလေးလိင်အကြမ်းဖက်ပုံတွေတင်တဲ့သူကို စစ်မယ် သူ့ Device ထဲကနေ ပုံတစ်ပုံပဲတွေ့တယ် ... ဒီလောကက်နဲ့ တရားရုံးမှာ တင်ပြရင် သက်သေမခိုင်လုံဘူး .... နောက်တစ်မျိုးက DDOS Attack တိုက်နေတယ်လို့ယူဆရတဲ့ Device တစ်ခု....တရားခံဟာ .CNC ပြုလုပ်ပြီး .တစ်ကယ်တိုက်နေတာလဲ ဖြစ်မယ် . ဒါမှမဟုတ် ... မသိလိုက်ဘဲ DDOS တိုက်ဖို့ Bot တစ်ခု (အလွယ်ကူဆုံးဆိုရင် Device မှာ virus ၀င်နေတာ) လဲဖြစ်နိုင်တယ် .... အဲဒါမျိုးဆို တစ်ဖက် ရှေ့နေ ဘက်က ခြေပနိုင်ရင် ... လွတ်ဖို့သေချာသလိုက်ရှိနိုင်တယ် ... ဒါကြောင့် သံသယရှိယုံထက် သက်သေကို ခိုင်ခိုင်မာမာပြနိုင်ရမယ် ...
Forensics နည်းပညာထွန်းကားလာပုံ 1822-1911 ကာလအတွင်းမှာတော့ လက်ဗွေနည်း စနစ် စတင်ပြီးတိုးတက်လာပါတယ် ... 1847-1915 criminal investigation တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မှုခင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို စစ်ဆေးကာ သက်သေရရှိမှုအပေါ်မူတည်ပြီး တရားခံကို ရုပ်လုံးဖော်ခြင်း ပညာရပ်ဟာ တိုးတက်လာပါတယ် ... 1858-1946 လက်ရေး လက်မှတ် စာရွက်စာတမ်း အတု ဖြစ်မဖြစ် စစ်ဆေးတဲ့ နည်းပညာဟာ တိုးတက်လာပါတယ် .... 1887-1954 ကာလအတွင်းမှာတော့ သွေးအမျိုးအစားအုပ်စုခွဲကာ စစ်ဆေးခြင်း ပညာရပ်ဟာ ထွန်းကာလာပါတယ် .... 1891-1955 သေနည်ကျည်ဆံကို ကြည့်ပြီး အမျိုးအစားခွဲခြားတဲ့ ပညာရပ်တိုးတက်လာပါတယ် ... 1932 င်္FBI ကနေ နည်းပညာရှင်နဲ့ Agent ပေါင်း 500 ကျော်နဲ့ အထက်ဖော်ပြစစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ အတွက် Forensics LAB ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါ တယ် 1984 FBI ကို ကူညီရန် The Computer Analysis and Response Team (CART )ကိုစတင်ထည်ထောင်ခဲ့ပါတယ် ... 1993 Computer သက်သေခံချက်တွေအတွက် ပထမဆုံး Conference ကို အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ် ... 1995 နည်းပညာဖလှယ်ရန် International Organization on Computer Evidence (IOCE) ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ 1998 The In
What is Digital Forensics ? Part (2)
Hypothesis လို့ခေါ်တဲ့ ထင်မြင် ယူဆချက်အကြောင်းလာပါပြီး ..... Case တစ်ခုအတွက်ဖမ်းဆီးပြီး သက်သေခံ Device (Laptop ပဲဆိုကြပါစို့) ကိုသိမ်းထားလုိုက်ပြီး ဥပမာ ... ကလေးသူငယ်ပုံတွေကိုတင်ပြီး အွန်လိုင်းကနေ လိင်အကြမ်းဖက်လုပ်ဆောင်တဲ့အမှုပေါ့ .... (သိမ်းဆည်းနည်း စစ်ဆေးနည်း အကျဉ်းကို PART 1 မှာရေးပြီးပါပြီး) လုပ်ဆောင်တဲ့သူကဒီလူပဲဆိုတာလဲ သေချာသလောက်ရှိနေပြီး .... laptop ကိုအသုံးပြုပြီး ပစ်မှုကျူးလွန်တယ်လို့လဲယူဆတယ် .... ခက်တာက သိမ်းဆည်းမိတဲ့ Laptop က တံခါးပြန်တပ် ... Sorry ... :) Window ပြန်တင်ထားတာမကြာသေးဘူး ..... .... ကဲ ယူဆချက်တော့ရှိပြီး သက်သေခံအချက်အလက်ကမရသေးဘူး ... ကဲ.. ဘာလုပ်မလဲ .... laptop အသုံးပြုထားတဲ့ Time ... Window ပြန်တင်ထားတဲ့အချိန်ကို ကြည့်မယ် .... ပြီးရင် .... Storage Device ဖြစ်တဲ့ Hard Disk ဒါမှမဟုတ် SSD ပေါ့.... အဲဒါတွေရဲ့ Power On Time စစ်မယ် ... HD or SSD ၇ဲ့ Health ကိုစစ်မယ် .... စစ်ဆေးနေတုန်း... HD ကြွသွားရင် လုံးဝအဆင်မပြေနိုင်ဘူးလေ.... အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ ... မူရင်း HD or SSD ကနေ Clone ယူပြီး စစ်ဆေးတာ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် ...ဒါမှ သက်သေခံ
CERT ကနေအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားတာကတော့ .... Network or information System တစ်ခုကို ကိုင်တွယ်နေရသူတစ်ယောက်ဟာ Forensics အခြေခံကို နားလည်ရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်... ပိုမိုပြည်စုံအောင် ဖွင့်ဆိုမယ်ဆိုရင် သိပ္ပံနည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကို အသုံးချပြီး... အချက်အလက်တွေကို စစ်ဆေးခြင်း ... သက်သေတွေကိုစုစည်းခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်...။ သက်သေတွေကို စုစည်းခြင်းဆိုတာကတော့ DNA fingerprint တို့ကို စစ်ဆေးစုစည်းခြင်းကဲ့သို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာကတော့ data တွေကို စစ်ဆေးပြီး သက်သေခံရှာဖွေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Forensics မှာ အဓိက လုပ်ငန်းကတော့ ငုပ်လျှိုးနေတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်...ဖော်ထုတ်တယ်ဆိုတာမှာ RECOVERY လုပ်ခြင်းအပိုင်းအပါအ၀င် နည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်.။ ဥပမာ... ကွန်ပျူတာပေါ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ လက်ဗွေ... DNA ယူခြင်းဟာလည်း Forensics အပိုင်းမှာပါဝင်ပါတယ် ... Cyber Forensics မှာ အဓိကအချက် ၂ ရှိပါတယ်... ပထမအချက် ဖမ်းဆည်ရမဲ့သူဟာ.... ဖမ်းဆည်းနေချိန်မှာ Electronic Device ကိုအသုံးပြုနေပြီး ဘာတွေလုပ်ဆောင်နေသလဲ ဥပမာ online လောင်းကစားလုပ်နေတာလား စသည်ဖြစ်ပေါ့ .... ပြီးရင် Website ကိုအသုံးပြုပြီးလု
2017 အတွင်း အဖွဲ့အစည်းများမှ သတင်းအချက်အလက်ပေါက်ကြ...